လျှပ်စစ်အင်ဂျင်နီယာ ဘာသာရပ် - ဝီကီပီးဒီးယား
လျှပ်စစ်အင်ဂျင်နီယာ ဘာသာရပ် သည် အင်ဂျင်နီယာ ဘာသာရပ်တစ်ခုဖြစ်ပြီး လျှပ်စစ်ဓာတ်၊ အီလက်ထရွန်းနစ်နှင့် လျှပ်စစ်သံလိုက်များအား လေ့လာသည့်နယ်ပယ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ယင်းနယ်ပယ်သည် လျှပ်စစ်တယ်လီဂရပ်၊ တယ်လီဖုန်း၊ လျှပ်စစ်ဖြန့်ဖြူးရေး၊ အသံလွှင့်ခြင်းစသည်တို့ကို နေ့စဉ်သုံးလာပြီး ၁၉ ရာစုနှစ်ထက်ဝက်နောက်ပိုင်းတွင် အသုံးတွင်ကျယ်လာခဲ့သည်။ ထရန်စတာ၊ integrated circuit များကို တီထွင်ပြီးနောက်ပိုင်း အိမ်သုံး အီလက်ထရွန်းပစ္စည်းများ အသုံးချရာတွင် အရေးပါလာခဲ့သည်။
လျှပ်စစ်အင်ဂျင်နီယာတို့သည် ကြီးမားရှုပ်ထွေးသော ပါဝါစနစ်မှ သေးငယ်သည့် အီလက်ထရွန်းနစ်ပစ္စည်ူများအထိ ဒီဇိုင်းရေးဆွဲကြသည်။
၁ နာနိုမီတာ ရှည်လျားသော လျှပ်စစ်ပတ်လမ်းများ
ယခုခေတ်တွင် လျှပ်စစ်အင်ဂျင်နီယာသည် များပြားလှသော နယ်ပယ်အခွဲများစွာ ရှိလာခဲ့သည်။ ယင်းတို့မှာ အီလက်ထရွန်းနစ်။ ဒယ်ဂျစ်တယ် ကွန်ပျူတာ၊ ပါဝါအင်ဂျင်နီယာဘာသာ၊ ဆက်သွယ်ရေး၊ ထိန်းချုပ်စနစ်၊ ရေဒီယိုကြိမ်နှုန် အင်ဂျင်နီယာဘာသာ၊ အချက်ပြ လုပ်ဆောင်ခြင်းနှင့် မိုက်ခရိုအီလက်ထရွန်းနစ်တို့ဖြစ်သည်။ ယင်းနယ်ပယ်အသီးသီးတို့သည် အခြားသော အင်ဂျင်နီယာဘာသာရပ်များနှင့် ဆက်နွယ်လျက်ရှိသည်။ ထို့အပြင် ဟဒ်ဝဲလ် အင်ဂျင်နီယာဘာသာ၊ ပါဝါ အီလက်ထရွန်းနစ်၊ မိုက်ခရိုဝေ့အင်ဂျင်နီယာဘာသာ၊ လျှပ်စစ်သံလိုက်လှိုင်း အင်ဂျင်နီယာဘာသာ။ နာနို နည်းပညာ၊ ဖွံ့ဖြိုးမြဲစွမ်းအင်၊ လျှပ်စစ်ဓာတု၊ စက်မှုအီလက်ထရွန်းနစ်နှင့် လျှပ်စစ်ပစ္စည်းသိပ္ပံ အစရှိသည်တို့ဖြစ်ကြသည်။
လျှပ်စစ်အင်ဂျင်နီယာဘာသာသည် အင်ဂျင်နီယာဘာသာရပ်၌ လျှပ်စစ်အင်ဂျင်နီယာဘွဲ့ သို့မဟုတ် အီလက်ထရွန်းနစ်အင်ဂျင်နီယာဘွဲ့များဖြင့် သီးသန့် ဘွဲ့ဒီဂရီ ပေးလေ့ရှိသည်။ IEEE မှ ပေးအပ်သော ပရော်ဖက်ရှင်နယ် အသိမှတ်ပြုလက်မှတ်များကိုလည်း ရယူနိုင်သည်။ လျှပ်စစ်အင်ဂျင်နီယာများသည် စက်ရုံအလုပ်ရုံများ၌ အရည်ချင်းရှိသောသူများဖြစ်ရန် လိုအပ်ပေသည်။ ယင်းတို့၌ လျှပ်စစ်ပတ်လမ်းသီအိုရီ ကျွမ်းကျင်မှုနှင့် စီမံခန့်ခွဲရေးနှင့်သက်ဆိုင်သည့် စီမံကိန်း မန်နေဂျာအထိ ပါဝင်သည်။ ကိရိယာတန်ဆာပလာများသည်လည်း ဗို့မီတာမှ ခေတ်မှီဆော့ဝဲလ်များကို ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာသည့်အထိ အကျုံးဝင်သည်။
ထိန်းချုပ်စနစ်သည် အာကာသပျံသန်းရေးအတွက် အရေးပါသည့်အခန်းမှ ပါဝင်သည်
↑ Smallest. Transistor. Ever. | Berkeley Lab
↑ What is the difference between electrical and electronic engineering?။ FAQs - Studying Electrical Engineering။ 10 February 2005 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။4February 2005 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
MIT OpenCourseWare Archived 26 January 2008 at the Wayback Machine. In-depth look at Electrical Engineering with online courses featuring video lectures.
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=လျှပ်စစ်အင်ဂျင်နီယာ_ဘာသာရပ်&oldid=693312" မှ ရယူရန်
၂၈ စက်တင်ဘာ ၂၀၂၁၊ ၂၀:၂၁ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး တည်းဖြတ်ခဲ့သည်။
ဤစာမျက်နှာကို ၂၈ စက်တင်ဘာ ၂၀၂၁၊ ၂၀:၂၁ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။